Ny fifangaroana tsara amin'ny nylon matevina sy maivana ary spandex manintona sy mandrobo dia mahatonga ireo leggings ireo ho tsara indrindra amin'ny tontolo roa. Mahatsapa ho malefaka sy milamina toy ny landihazo ihany izy ireo raha manao akanjo mahazatra ary mamono hatsembohana rehefa miasa. … Ny leggings nylon-spandex no lalana tokony aleha.
Nylon Spandex dia voasokajy ho kofehy elastomerika na fibre na fitaovana fotsiny afaka manitatra mihoatra ny 500% nefa tsy tapaka. Ny zava-mahatalanjona vaovao amin'ity fibre super-namboarina ity dia ny fahafahany miverina amin'ny habeny tany am-boalohany rehefa tsy ampiasaina. Nylon Spandex dia mpisolo toerana tsara amin'ny fingotra amin'ny akanjo satria manana elastika lehibe afaka miverina mora foana amin'ny endriny voalohany izy. Akanjo vita amin'ny Nylon Spandex no ahazoana aina kokoa, na dia tery aza izy ireo. Ny lamba Nylon Spandex dia maivana kokoa raha oharina amin'ny fingotra voajanahary izay mora kokoa amin'ny hoditra.
Nylon Spandex, anagram an'ny fanitarana, dia nanomboka nampiasa azy ho akanjo ankafizin'ireo maherifo toa an'i Superman sy Batman, saingy vetivety dia noraisin'ireo atleta amin'ny tontolontsika moderina. Ireo mpilomano, gymnast ary skater mpanao sary dia mitafy nylon Spandex misy akony lehibe. Na ny mpanao fanatanjahan-tena sy ny mpilomano aza dia mitafy atin'akanjo Nylon Spandex eny an-tsaha koa ny cricketer antsika.
Na dia amin'ny akanjo fanatanjahan-tena aza, ny lamba Nylon Spandex dia manana tombony betsaka amin'ny tanjona hafa koa. Ankoatra ny fahafahany mamerina ny endriny tany am-boalohany rehefa tsy ampiasaina sy endrika, Nylon Spandex dia lamba faran'izay mahazo aina. Maivana sy malefaka izy io ary koa mahatohitra ny menaka amin'ny vatana na ny hatsembohana. Izy io koa dia lamba fanoherana, antontany, ary tsy misy static.
Nylon Spandex dia nody ary tsy niakanjo lamaody nandritra ny taona maro tamin'ny endrika isan-karazany. Ohatra, ny jeans Nylon Spandex dia nalaza be tamin'ny taona 1980. Nylon Spandex no fitaovana nisafidy ho an'ny akanjo fanatanjahan-tena hatramin'ny nahitana azy. Ireto ny sasany amin'ny fampiasana voalohany an'ny Nylon Spandex.
Nylon Spandex dia ampiasaina amin'ny akanjo Swimsuits. Ny atin'akanjo, Bra straps, ba kiraro dia aleony ihany koa manana nylon Nylon Spandex fitaovana. Ny kojakoja fanatanjahan-tena hafa toy ny short shorts, suit Wrestling, Netball, ary volleyball suit dia aleony ihany koa ny manana nylon Spandex lamba. Ny entana hafa nomanina avy amin'ny Nylon Spandex dia misy wetsuit, fonon-tànana, Diapers, akanjo fitondra mihetsika ary akanjon'i Zentai, fehikibo, fantsom-pamokarana ary unisuits Rowing.
Ny Nylon Spandex dia tantara foronina be mpitia ihany koa. Akanjo akanjo Nylon Spandex rehetra dia miakanjo akanjo Nylon Spandex. Ny Nylon Spandex dia noheverina ho fitaovana ho avy, ka ny tantara sy ny tantara an-tsary rehetra mampiseho ny akanjon'izy ireo amin'ny akanjo Nylon Spandex.
Ny fahaizana sy ny tanjaky an'ity lamba ity dia midika fa azo ampiasaina amin'ny tanjona isan-karazany. Ny kilaoty fohy fanaovana fanatanjahan-tena dia iray amin'ireo fampiharana mahazatra indrindra an'ity lamba ity satria mamela ny vatana hifoka izy ireo, ary mivelatra sy mihombo ny hozatra mandritra ny fanazaran-tena. Ny antony iray hafa dia satria, mamela anao hijery ny hozatra mandritra ny fampihetseham-batana ianao ary ho voan'ny fahitana azy.
Rehefa misafidy ny akanjo Nylon Spandex dia misy zavatra vitsivitsy tsy tokony hotadidinao. Voalohany dia ny antony anaovan'ny tsirairay ny akanjo. Eritrereto, raha mitady pataloha mihazakazaka ianao dia mila manapa-kevitra eo amin'ny akanjo mainty sy mora. Ny mainty hoditra dia mety tsara amin'ny andro mangatsiaka sy hazakazaka fohy satria manafana anao izy ireo raha toa ka mety ho an'ny masoandro sy ny andro malefaka ny karazana baggiest.